Domain Host Header Error — MYSTERY ZILLION
Domain Host Header Error
September 2011 edited September 2011 in Web Development
domain host header မှာ ကျွန်တော်ပြင်ချင်တာထည့်လိုက်ပါတယ်
လို့ပြင်လိုက်ပါတယ် အဲ့နောက်မှာ site မှာ ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေ မတွေ့သလို 404 not found error ပြနေပါတယ်. ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေလည်း ရှိပါတယ်။site မှာ wordpress နဲ့ လုပ်ထားတာပါ....ဘယ်လို ပြန်ပြင်ရင် ရ နိုင်မလဲ ခင်ဗျ server က windows server ပါ။
September 2011 Administrators
IIS or apache ?
IIS ပါ ကိုစေတန်....host header မှာပြောင်းပြီးတော့..အဆင်မပြေတာနဲ့ default အတိုင်းထားလိုက်ပါတယ်..အဲ့ဒါလည်း မရသေးပါဘူး..အခုတော့.. page တွေကိုခေါ်ရင် index.php ကိုခေါ်ရင် phpmyadmin page ကျ ကျနေပါတယ်..
you need to add rewrite rule in IIS
ဟုတ်.အခုက WP တွေမှ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ..တခြား HTML page တွေခေါ်လည်း အဲ့လို အယ်ယာပဲ ကျတယ်ခင်ဗျ...domain နဲ့ file path ချိတ်ထားတာ လွဲသွားလားမသိဘူး..ဖိုင်တွေက အကုန်ရှိပြီး ဖွင့်လို့မရတာ...နောက်ပြီး ကျွန်တော့် ဟို့စ် က cpanel အပြည့်မရဘူးခင်ဗျ.. အဲ့လို ဒိုမိန်းနဲ့ ဖိုင်လမ်းကြောင်းချိတ်ထားတာတွေလည်း ကြည့်လို့မရဘူးခင်ဗျ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟို့စ် ဘက်ကိုပဲ ပြန်ပြောရမလား..ကျွန်တော်ပဲ ပြင်လို့ရမလား..ပြောပေးပါဦး.
Clients cannot connect to the Web sites by using host header names:
Multiple host names must be mapped to the single IP address by usingaDNS server oraHosts file.
အဲ့ဒါကို ဘယ်လို ပြန်ရှင်းလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျ.
ရသွားပါဘီ ကျေးဇူးပါ ကိုစေတန်...iis Stop ဖြစ်သွားလို့ဗျ.. ဟို့စ် ဘက်ကိုပြောပြီး start လုပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်..ကျေးဇူးပါ...